सेयरमा लगानी गर्दा २ प्रतिशत नाफा, सुनमा १४ प्रतिशत ! Bizshala -
सिभिल बैंकलाई ४०% हकप्रदको अनुमति
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स
सेयरमा लगानी गर्दा २ प्रतिशत नाफा, सुनमा १४ प्रतिशत !
नयाँदिल्ली । आजदेखि सन् २०१६ अन्त हुँदैछ । भारतमा यो वर्ष स्टक मार्केट, सुुन, प्रोपर्टी र बैंकको मुद्धती खातामा लगानीले निकै धेरै उतारचढावको सामना गर्नुपर्यो । मानिसहरुले सबैभन्दा धेरै पैसा लगानी गर्ने यी क्षेत्रमा कसले कस्तो प्रदर्शन गरे भन्ने एक रिपोर्ट भारतीय संचारमाध्यमहरुमा छापिएको छ ।
भारतको सेयर बजारको कुरा गर्ने हो भने सेन्सेक्सले २ प्रतिशतको रिटर्न दियो भने निफ्टीले ३ प्रतिशतको रिटर्न दियो । अटो क्षेत्रको सेयरले सबैभन्दा राम्रो रिटर्न दियो । यो क्षेत्रले ११ प्रतिशतसम्म रिटर्न दियो । तर निफ्टी आइटी र फर्मा सेक्टरमा लगानी गर्नेहरुले भने घाटा खानुुपर्यो ।
सेयर बजार खासै उत्साहजनक नभए पनि सुनमा लगानी गर्नेहरु भने मालामाल भए । सन् २०१६ मा सुनमा लगानी गर्ने भारतीयहरुले १४ प्रतिशतको रिटर्न पाए । सन् २०१५ डिसेम्बर ३१ मा भारतमा सुन प्रति १० ग्राम २४ हजार ९ सय ५० भारुमा कारोबार भएको थियो भने ३० डिसेम्बर २०१६ मा यो मूल्य प्रति १० ग्राम २८ हजार ५ सय भारु पुुगेको छ ।
उता, बैंकको मुद्धती निक्षेपमा पैसा राख्नेहरुले पनि खासै कमाएनन् । मुद्धती निक्षेपको रिटर्न सन् २०१६मा घट्यो । २०१५ डिसेम्बरमा भारतीय स्टेट बैंकमा विभिन्न अवधिको एफडीमा ७ देखि ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका लगानीकर्ताले अहिले तिनै खातामा पैसा राख्दा ६.५० प्रतिशतदेखि ६.८५ प्रतिशतसम्म मात्र रिटर्न पाउने गरेका छन् ।
प्रोपर्टी सेक्टरलाई आम रुपमा लगानीको हिसाबले सुरक्षित र आकर्षित क्षेत्र मानिन्छ । तर सन् २०१६ मा यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु पनि निराश नै बन्नुपर्यो । भारतका अधिकांश ठाउँमा प्रोपर्टी सेक्टरको मूल्य अघिल्लो वर्षको ठाउँमै स्थिर रह्यो, यसको अर्थ हो लगानीकर्तालाई शून्य हात लाग्नु । केही विज्ञहरुले भारतको रियलस्टेट(घर, जग्गा) लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्दा सन् २०१७ मा घाटा व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
indian market gold
साधारणसभा घोषणाको लर्को, कसले कहिले बोलाए(सूचिसहित) ?
राप्तिभेरीलाई गाभेर ज्योतिले कात्तिक ८ देखि कारोबार थाल्ने
तिहार विदामा कुन बैंकको शाखा खुल्छ(हेरौं सूचिसहित) ?
२० करोड डलर दान दिने भारतीय जोडीको रोचक कथा !
ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी नेपाली सेवा अमेरिकामा भाग्य चम्काएका...
पाकिस्तानमा गुड्न थाल्यो पहिलो मेट्रो रेल, नेपालमा कहिले ?
काठमाण्डौ । पाकिस्तानमा पहिलो मेट्रो रेल गुड्न थालेको छ । चीनको...
अभूतपूर्व संकटमा फस्यो सामसङ, सीइओले दिए राजीनामा
काठमाण्डौ । दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठित इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी...
भारतमा अत्यासलाग्दो आर्थिक मन्दी, मोदीले बोलाए आपतकालीन बैठक
काठमाण्डौ । देशको आर्थिक वृद्धिदर लगातार घट्न थालेपछि अत्तालिएका...
मूकेश अम्बानी फेरि भारतका सर्वाधिक धनी, आचार्य बालकृष्णले
काठमाण्डौ । विभिन्न क्षेत्रमा कारोबार गर्ने कम्पनी रिलायन्स...
‘पाप’ गर्नेसँग कर असूल्दै यूएई, अर्थतन्त्र जोगाउने अनौठो शैली
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय गिर्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण...
स्याङ्जाका गरीबका छोरा भारतका ८ औं धनी बन्न सफल !
काठमाण्डौ । एक गरीब नेपाली चौकीदारका छोरा भारतको सर्वाधिक धनी...
समाजसेवाका लागि फेसबुकको १२ अर्ब डलरको सेयर बिक्री गर्दै
काठमाण्डौ । प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क...